Puntland: Gaas oo la kulmey waxgaradka gobolka Barri
Kulankaan ayaa wararka Garowe online helayo looga hadley cabashooyin beelaha Barri ka muujinayeen maalmihii la soo dhaafey qaar ka tirsan madaxda dowlada ee gobolka iyo sida xukuumada madaxweyne Gaas u maamusho qandaraasyada kasoo baxa gobolkaas gaar ahaan magaalada Bosaso.
Madaxweynaha dowlada Puntland ayaa wararku sheegayaan in kulankaas uu ku dhageystey qodobadii ay soo jeediyeen gudigaan isaga oo ka codsadey iney sugaan inta uu kasoo noqonayo magaalada Muqdisho.
Kulankaan ayaa maalmihii ugu dambeeyey lagu muransanaa qaabka uu u dhacayo iyadoo madaxweyne Gaas dalbadey markii hore in si wadajir ah uusan ula kulmeyn beelhaan balse ka biyo diideen in gooni gooni ugu tagaan.
Muranka gobolka ka taagan ayaa salka ku haya cabashooyin laga qabo sida xukuumada Puntland u magacowdo saraakiisha dowlada oo ka howlgala gobolka kuwasoo qarkood lagu eedeynayo iney aflagaado u gaystaan bulshada halkaas dagta.
Dhinaca kale waxaa jira eedymo loo jeedinayo madaxweynaha Puntland ee la xiriira qaabka uu u maamuley qandaraasyo kasoo baxey garoonka cusub ee Bosaso kuwasoo la siiyey dad isaga ku dhow.
Madaxweynaha dowlada Puntland ayaa laga sugayaa inuu ka qayb galo kulan magaalada Muqdishu loogu qabanayo madaxda Somalida 23 Jan, 2016 kaasoo beesha caalamka ka sugeyso iney go'aamo laga saaro.
Mundane Cabdiweli Maxamad Cali Gaas ayaa s ...
​Puntland: Golaha wasiirrada oo kulmay
Puntland 13.02.2016. 20:13
Beesha caalamka oo madaxda Somalida wakhti u qabatey
Soomaliya 19.01.2016. 20:43